किन माधवकुमार र बाबुरामलाई मुद्दा नचलाएको भन्दै सर्वाेच्च माग्यो अख्तियारसँग जवाफ
काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । गत माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे थियो । तर, नीगिगत निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर नगरेपछि गत बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले नेपाल र भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिए ।
यसका शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु किन नपर्ने हो? त्यसको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको हो।इजलासले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिएको सर्वाेच्चले अरु विपक्षीसँग भने जवाफ मागेको छैन ।
बालुवाटारको ललिता निवासको करिब सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्व सचिवको संलग्नता रहेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । तर, जुन मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको सोही मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्रीहरुलाई भने छुट दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यसैबेला अधिवक्ता न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।